सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको बिमाशुल्कमा ८१.३४%को उछाल, मुनाफा कति ?
काठमाण्डौ । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चौथो त्रैमाससम्ममा १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खुद बिमाशुल्क आर्जन गरेको छ। यो रकम अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८१.३४ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्ष कम्पनीको खुद बिमाशुल्क आर्जन ७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ थियो। समीक्षा अवधिमा कम्पनीले लगानी कर्जा तथा अन्यबाट हुने आय...
अजोडको बिमाशुल्क आर्जनमा ७९.१५%को छलाङ, नाफा रु. ६.२० करोड
चौथो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले बिमाशुल्कबापत २७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा कम्पनीले बिमाशुल्कबापत १५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो। यो त्रैमासमा कम्पनीले पुनर्बिमा कमिसन आयअन्तर्गत १४ करोड ३९ लाख आर्जन गरेको छ। जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०९.७७ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्ष...
एभरेस्ट इन्स्योरेन्स : बीमाशुल्कभन्दा दाबीभुक्तानीमा रफ्तार, नाफामा भने ३८१.५२% को उछाल
काठमाण्डौ । एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बीमाशुल्क आर्जनमा भएको प्रगतिको तुलनामा दाबीभुक्तानी निकै बढेको देखिन्छ। कम्पनीले आइतबार प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणले यस्तो देखाएको हो। यसले यस्ता कम्पनीहरु व्यापार प्रगतिको हकमा तीव्रगतिमा दाबीभुक्तानी बढ्नु राम्रो संकेत मान�...
एनएलजी इन्स्योरेन्सद्वारा लाभांश प्रस्ताव, बोनस सेयर र नगद कति ?
काठमाण्डौ। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीको गत साउन २३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। जसअनुसार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को सञ्चित मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापुँजी १ अर्ब २ करोड ४६ लाख ५० रुपैयाँको ७ प्रतिशतले हुन आउने ७ करोड १७ लाख २५...
एनएलजी इन्स्योरेन्सको लिलामी सेयरमा आजबाट आवेदन खुला
काठमाण्डौ । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले अवितरित हकप्रद सेयर आज बिहीबारबाट लिलामी प्रक्रियामार्फत बिक्रीमा राखेको छ। कम्पनी गत चैत १२ गतेदेखि असार २५ गतेसम्म चुक्तापुँजीको १०ः६ को अनुपातमा प्रतिकित्ता रु. १०० अंकित ३८ लाख ४२ हजार ४३७.५० कित्ता हकप्रद बिक्री खुलाएको थियो। जसमा ३६ लाख ८१ हजार ३५९.५० कित्तामात्र बिक्री भएको...
अजोड इन्स्योरेन्सको १ करोड कित्ता सेयर दोश्रो बजारमा आउने
काठमाण्डौ । अजोड इन्स्योरेन्स लिमीटेडको आइपीओ दोश्रो बजारमा कारोबारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जसँग अजोड इन्स्योरेन्सले केही समयअघि निश्कासन गरी बाँडफाँड सकेको आइपीओ सेयर सूचिकरणको सम्झौता गरेको हो । सोमबार अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड बीच प्रति शेयर अंकित...
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले लाभांश वितरण नगर्ने
काठमाण्डौ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मुनाफाबाट लाभांश वितरण नगर्ने भएको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको हिजो बिहीबार बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मुनाफाबाट लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकबाट पुनर्बीमा व्यवसाय (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०१७ को दफा १२ अनुसार ‘पुनर्बीमकले...
एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको २५ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
काठमाण्डौ । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.को २५ औं वार्षिक साधारण सभा आज मंगलबार अग्रवाल भवन, कमलपोखरी, काठमाण्डौंमा सम्पन्न भएको छ । दिउसो २ बजे शुरु भएको सभामा कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्ष राजीव सापकोटाले कम्पनीको वर्तमान गतिविधि, कम्पनीका भावी योजना तथा रणनीति सम्बन्धमा आफ्नो मन्तब्य राखे । कम्पनीको २५ औ बार्षिक साधारण...
काठमाण्डौ। गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि प्रस्तावित लाभांश पारित गर्दै लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको १५ औँ वार्षिक साधारणसभा बुधबार सम्पन्न भएको छ। सभाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मुनाफाबाट विगतमा कम्पनीले जारी गरेको २० प्रतिशत हकप्रद सेयरले समेत प्राप्त गर्ने गरी चुक्ता पूंजी रु. १ अर्ब ५ करोड ६० लाख रुपैयाँको ८.१२५...
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको हकप्रदमा खरिद गर्ने आज अन्तिम मौका, क–कसले किन्न पाउँछ ?
काठमाण्डौ । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको हकप्रद सेयर खरिद गर्ने आज शुक्रबार अन्तिम मौका रहेको छ। कम्पनीले गत फागुन १८ गतेदेखि चुक्तापुँजी ६४ करोड १५ लाख २० हजार रुपैयाँको१०ः६ को अनुपातमा (अर्थात् विद्यमान १० कित्ता सेयरबराबर नयाँ थप ६ कित्ता सेयरका दरले) हकप्रद निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको छ। कम्पनीले सेयरधनीहरुका...
एभरेष्ट इन्स्यारेन्सले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, यस्तो छ मुख्य अजेन्डा
काठमाण्डौ । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो २५ औँ वार्षिक साधारणसभाको मिति र स्थान तय गरेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको हिजो सोमबार बसेको बैठकले सभा आउँदो साउन ६ गते मंगलबार कमाठमाण्डौको कमलपोखरीस्थित अग्रवाल भवनमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभामा अन्य निर्जीवन बीमा कम्पनीसँगै मर्जरमा जाने एजेन्डा विशेष प्रस्तावका...
शिखर इन्स्योरेन्सको हकप्रद आजबाट बिक्री खुला, क–कसले दिन पाउँछ खरिद आवेदन ?
काठमाण्डौ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आज आइतबारदेखि चुक्तापूँजीको ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको छ। कम्पनीले १:०.३ अनुपात अर्थात १० कित्ताबराबर ३ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको हो। कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका ३१ लाख ७१ हजार ९३२ कित्ता हकप्रद बिक्री खुला गरेको छ। हकप्रद निष्कासनका लागि कम्पनीले फागुन १३...
शिखर इन्स्योरेन्सको हकप्रद असार १४ गतेबाट बिक्री खुला गरिने
काठमाण्डौ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले यही असार १४ गतेदेखि चुक्तापूँजीको ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले १:०.३ अनुपात अर्थात १० कित्ताबराबर ३ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका ३१ लाख ७१ हजार ९३२ कित्ता हकप्रद बिक्री खुला गर्नेछ। हकप्रद निष्कासनका लागि कम्पनीले...
जनरल इन्स्योरेन्सले थाल्यो आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया, पुग्यो धितोपत्र बोर्ड
काठमाण्डौ। जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आईपीओ निष्कासनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ निष्कासनको अनुमति माग्दै सुरुआती प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। कम्पनीले गत असार ५ गते बोर्डमा आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएको छ। कम्पनीले रु ३० करोडबराबरको ३० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति...
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले सोमबार लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित ८.१२ प्रतिशत बोनस सेयरका लागि लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो। समायोजित मूल्यअनुसार अब यो कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ३४६ रुपैयाँ कायम भएको...